Voankazo sy legioma mena misy tsiranoka | ThermoRecipes
Voanjo Red Bean Stew
Verduras20 minitraOlona 4250 kaloria
Es vegan y es masiaka, Is a lovia sotro, ron-kena mafana sy matevina. ATSINANANA nahandro vegan de Tsaramaso mena Resipeo tsara ho an'ny andro mangatsiaka indrindra. Nanampy mikasika ny katsaka, mahatadidy ny fitambaran'ny tsaramaso sy katsaka izay natolotry ny nahandro Meksikana taminay. Izy ireo dia matsiro, nefa koa loharanom-proteinina lehibe, satria ny tsaramaso sy ny katsaka dia mifameno ara-tsakafo ary mampitombo ny sandan'ny proteinina.
Nomeko teboka maranitra izy, teboka afovoany izay nampatsiahy ahy ny lentil India manankarena tokoa. Azonao atao ny mampitombo na mampihena ny haavon'ny spiciness, mampitombo na mampihena ny haben'ny sakay.
1 Voanjo Red Bean Stew
Voanjo mena mangahazo voanemba miaraka amin'ny katsaka. Mety amin'ny andro ririnina.
400 g tsaramaso voa masaka (vilany lehibe iray, lanja maina)
Voan-katsaka mamy 150 g nahandro (can iray)
Tongolo 170 g
Voahangy mena maina 1
60 g ny dipoavatra mena
Saosy voatabia 1 sotro
sakamalaho eran'ny sotrokely dibera fotsy
300 ml rano
Atsofohy ao anaty vera ilay tongolo voahitsakitsaka sy natoraly, ny dipoavatra, ny jirofo vita amin'ny tongolo lay, ny sakay, sira antsasaky ny eran'ny sotrokely ary menaka 25 ml. Tetehina mandritra 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Avy eo manosika anay 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny voatabia, rano ary tsaramaso nendasina. Ampio sira mba hanandrana (nasiako eran`ny sotrokely) sy programa 10 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny katsaka ary afangaro moramora amin'ilay spatula.
Fanazavana fanampiny - Krim-toto lentil Indiana
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: legioma, Latsaky ny 1/2 ora, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » legioma » Voanjo Red Bean Stew
Salady atody atody grika
Cookies monster ho an'ny Halloween